SEO: 2 Hab oo Wanaagsan oo Looga Saaro Nuxurka Kooban, iyo 8 Kuwa Xun | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/SEO: 2 Hab oo Wanaagsan oo Looga Saaro Nuxurka Kooban, iyo 8 Kuwa Xun
Nuxurka nuqulku waa laba bog ama ka badan oo ka kooban qoraal isku mid ah ama isku mid ah. Nuxurka nuqul ka mid ah ayaa kala qaybiya awoodda isku xidhka oo sidaas awgeed hoos u dhigaysa awoodda bogga si uu u darajeeyo natiijooyinka raadinta dabiiciga ah.
Waxaad dhahdaa degelku wuxuu leeyahay laba bog oo isku mid ah, mid walbana wuxuu leeyahay 10 dibadda ah, xiriiriye gudaha ah. Goobtaas waxay ka faa'iidaysan kartaa xoogga 20 xiriiriye si kor loogu qaado darajada hal bog. Halkii, goobtu waxay leedahay laba bog oo leh 10 xiriiriye. Midkoodna sida ugu sarreeya uma qiimeyn doono.
Xogta nuqulku waxay sidoo kale dhaawacdaa miisaaniyada gurguurta oo haddii kale waxay dumisaa tusmooyinka matoorada raadinta.
Goobaha ecommerce waxay abuuraan waxyaabo nuqul ah. Waa maxsuul ka dhashay habaynta madal iyo go'aannada tignoolajiyada. Waxa soo socda waa laba siyaabood oo wanaagsan oo looga saaro nuxurka nuqul ka mid ah tusmooyinka mashiinka raadinta - iyo siddeed si looga fogaado.
Ka saar Nuxurka Kooban ee la tilmaamay
Si loo saxo tusmeeyayaasha, nuqul nuqul ka mid ah, (i) isku xidhka awoodda isku xidhka hal bog iyo (ii) ku dhiirigeli makiinadaha raadinta inay ka saaraan bogga nuqul ka mid ah tusmahooda. Waxaa jira laba siyaabood oo wanaagsan oo tan loo sameeyo.
301 ayaa wareejiya waa doorashada ugu fiican. 301 waxa ay dib u jihaysaa awooda isku xidhka ee isku xidhka, isla markaana de-indexation-ka degdega ah, iyo sidoo kale u jihaysaa isticmaalaha bogga cusub. Google waxa ay sheegtay in ay boqolkiiba 100 ku meelayso maamulka xidhiidhka bogga cusub oo leh 301 dib u habayn. Laakin Bing iyo matoorada kale ee wax baadhida ayaa si adag u daboolan. Si kastaba ha ahaatee, isticmaal 301 dib-u-habeyn oo keliya marka bogga si joogto ah meesha looga saaro.
Canonical tags. "Canonical" waa kelmad qurux badan oo wax loo aqoonsaday inay tahay runta keliya. Horumarinta mashiinka raadinta, calaamadaha canonical waxay tilmaamayaan bogga ay tahay in la tilmaamo oo loo qoondeeyo awoodda isku xirka. Calaamaduhu waa talooyin si loo raadiyo matoorada - ma amarro sida 301 redirects. Matoorada raadinta waxay caadiyan ixtiraamaan summada canonical ee nuxurka nuqul ka mid ah.
Calaamadaha canonical waa ikhtiyaarka xiga ee ugu fiican marka (i) 301 dib-u-habeyntu ay yihiin kuwo aan macquul ahayn ama (ii) bogga nuqulku wuxuu u baahan yahay inuu sii ahaado mid la heli karo - tusaale ahaan, haddii aad leedahay laba bog oo badeecado ah, mid la soocay mid sare-ilaa-hoose, kan kalena hoose -ilaa-sare, ma rabi doontid inaad midba midka kale u leexiso.
8 Hababka Laga Fogaado
Qaar ka mid ah xulashooyinka ka saaraya - ama sheegta inay ka saarayaan - nuxurka nuqul ka mid ah tusmooyinka raadinta maahan talo, waayo-aragnimadayda.
302 ayaa wareejiya calaamadee dhaqaaq ku meel gaar ah halkii ay ahaan lahayd mid joogto ah. Google ayaa muddo sanado ah sheegtay in 302 dib u hagis ay ka gudbaan 100 boqolkiiba maamulka xiriirka. Si kastaba ha ahaatee, 302s ma soo dedejiyaan de-indexation. Mar haddii ay qaataan dadaal la mid ah hirgelinta 301-aad, 302 dib-u-habeyn waa in la isticmaalo oo keliya marka dib-u-habeyntu ay tahay mid ku-meel-gaar ah oo maalin uun laga saari doono.
Meta ayaa soo kicisay waxay u arki karaan dukaamaystayaashu sidii boog gaaban ama laba ilbiriqsi oo ku raran shaashaddooda ka hor inta uusan browserku soo gelin bog cusub. Waa doorasho liidata oo ay ugu wacan tahay waayo-aragnimada isticmaale ee xunxun iyo wakhtiga bixinta Google u baahan yahay si ay uga baaraandegto sidii dib-u-hagaajin.
Qalad 404 Muujiyaan in faylka la codsaday uusan ku jirin serferka, taasoo keentay in makiinadaha raadinta ay hoos u dhigaan boggaas. Laakin 404s sidoo kale waxay meesha ka saarayaan maamulka isku xirka ee bogga. Isku day inaad 301 dib u jiheyso bogga la tirtiray markaad awooddo.
Qaladaad jilicsan 404 Waxay dhacdaa marka server-ka 302 uu u jiheeyo URL xun waxa u eg bogga khaladka, ka dibna soo celisa 200 OK jawaabta madaxa server. Tusaale ahaan, dheh tusaale.com/bogga/ waa la saaray oo waa inuu soo celiyaa qalad 404 Taa beddelkeeda, 302 waxay u jihaysaa bog u eg bog khalad ah (sida www.example.com/error-bogga/), laakiin wuxuu soo celiyaa jawaab 200 ok.
Jawaabta 302 waxay si badheedh ah u sheegaysaa matoorada raadinta www.example.com/page/ wuu maqan yahay laakiin waxaa laga yaabaa inuu soo laabanayo, markaa bogga waa inuu ahaadaa mid la tilmaansan yahay. Waxaa intaa dheer, jawaabta 200 waxay u sheegaysaa matoorada raadinta www.example.com/error-bogga/ waa bog sax ah oo loogu talagalay tusmaynta. Jilicsan 404s sidaas darteed bararsan tusmada xitaa intaa ka sii badan taasoo keentay in aan kaliya hal URL xun la tilmaamin, laakiin laba.
Qalabka raadinta. Google iyo Bing waxay bixiyaan agabka meesha looga saaro URL. Si kastaba ha ahaatee, maadaama labaduba ay u baahan yihiin in URL-ka la soo gudbiyay uu soo celiyo qalad 404 oo sax ah, qalabku waa tallaabo gurmad ah ka dib markii laga saaro bogga server-kaaga.
Robotyada Meta noindex tag waa madaxa faylka HTML. The noindex sifadu waxay u sheegaysaa bots-yada inaysan tilmaamin bogga. Marka la codsado ka dib marka bogga la tusmeeyo, waxay aakhirka keeni kartaa in-indexation-ka, laakiin taasi waxay qaadan kartaa bilo. Nasiib darro, maamulka isku xirka wuxuu ku dhintaa awoodda matoorada si ay u tilmaamaan bogga. Oo mar haddii makiinadaha raadinta waa inay sii wadaan gurguurashada bog si loo xaqiijiyo in noindex sifada ayaa weli jirta, doorashadani ma dhimayso boggaga miisaanka dhintay ee tusmada. (Ogsoonow, shil ahaan, in nofollow sifada summada robots-ka meta wax saamayn ah kuma laha tusmaynta boggaas.)
Robots.txt diidid ma soo dedejiyo de-indexation. Bogagga la diido ka dib marka la tusmeeyo laguma gurguurto bots-ka raadinta, laakiin waxa laga yaabaa inay ku sii jiraan tusmaysan ama ma sii ahaan karaan. Uma badna in boggagani ay ka soo baxaan natiijooyinka raadinta ilaa la raadiyo URL, si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah makiinadaha raadinta mar dambe ma gurguuran doonaan bogga.
In kasta oo ayan ku habboonayn in laga saaro waxyaabaha la tilmaamay, robots-yada meta noindex iyo robots.txt diidid waa in ay labadooduba ka hortagaan in macluumaadka cusub ee nuqul ka mid ah la tilmaamo. Codsigoodu, si kastaba ha ahaatee, waxa uu u baahan yahay in nuxurka nuqul ka mid ah la aqoonsado ka hor inta aan la bilaabin goob cusub, mana aha 100-boqolkiiba wax ku ool ah.
Sharadkaaga ugu Fiican
Haddii aad u baahan tahay hab sugan oo ah de-indexation, 301 redirect ama 404 qalad ayaa ah betkaaga ugu fiican sababtoo ah seerfarku mar dambe ma raraynayo waxa boggaas laga helay. Haddii aad u baahan tahay inaad ka saarto bogga iyo ka faa'iidayso maamulka isku xirka, isticmaal 301 redirect.
Sida loo xakameeyo waxa iPhone-kaagu ku kaydiyo iCloud